Politika · Septambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Septambra, 2009
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Septambra, 2009
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Septambra 2009
Voasakana tsy hiteny teo anivon'ny Firenena Mikambana ny solontena malagasy
Madagasikara 30 Septambra 2009
Nitetika ny hampanaiky ny fitondrany, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, tamin'ny alalan'ny fandraisam-pitenenana teo anivon'ny Firenena Mikambana tao New York, i Andry Rajoelina izay tohanan'ny tafika, raha voasakana tsy hiteny. Miresaka momba izany ny mpamaham-bolongana sy ny mpisioka an-tserasera malagasy.
Filipina: Arahi-maso ny Artistan'ny Firenena
Filipina 30 Septambra 2009
Vao nanamafy ny Tafika an-dranomasina Filipiana fa iray amin'ny olony mizatra tena amin'ny fanaraha-maso ilay lehilahy tratra tamin'ny 17 Septambra nihaodihaody ny tranon'i Bienvenido Lumbera, poeta nahazo loka, mpilalao teatra, mpandalina literatiora ary solontenan'ny Artista ao amin'ny firenena.
Fitantanam-pitondrana 28 Septambra 2009
Amerika Latina 28 Septambra 2009
Etazonia: Hajian'ny Idy miteraka fankahalana any Tennessee
Amerika Avaratra 24 Septambra 2009
Andian'ilay hajia taona 2008 , nialoha ny fiakaran'ny vidim- piainana Raha eo am-pankalazana ny Idy al-Fitr, manamarika ny fiafaran'ny volana Ramadany, indrindra ny Miozolomana any Etazonia, dia mivezivezy haingana dia haingana any ny rojon'imailaka feno fanaratsiana. Miampanga lainga ny filoha Obama ho mamoaka hajia vaovao fahatsiarovana ny Idy roa sosona...
Kazakhstan: Tsy fahazakàna fampielezan-kevitra
Kazakhstan 23 Septambra 2009
Araka izay amaritan'i megakhuimyak azy, tamin'ny herinandro lasa iny tao Kazakhstan, “miha-henjana ny fikorosiana.” Mbola manalokaloka sy mibahana ao an-tsain'ny firenena iray manontolo ny vinantolahin'ny filoha teo aloha, Rakhat Aliev, fahavalo émigré ho an'ny fitondrana # 1. Ny tahotry ny olona ny fiandrianana mahafehy ny zavatra rehetra sy ny mpiasam-mpanjakana...